နေထိုင်မှုပုံစံ Archives - Page3of9- My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
အလှမပျက်ဖို့ အမာရွတ် တွေ ရုပ်မဆိုးအောင် ဘာတွေ လုပ်ကြမလဲ
အလှမပျက်ဖို့ အမာရွတ် တွေ ရုပ်မဆိုးအောင် ဘာတွေ လုပ်ကြမလဲ အမာရွတ် ဘယ်လိုဖြစ်လာတာလဲ အရွတ်ဆိုတာ အရေပြားရဲ့ dermis အလွှာကို ထိခိုက်မိလို့ collagen fibres တွေကတဆင့်ဖြစ်လာတာပါ ဘယ်လို ပင်ဖြစ်ပါစေ အမာရွတ်ဆိုတာဖြစ်ရင်ကို အသက်အရွယ်မရွေး အလှပျက်စေမှာ ဧကန်ပင်…
အသားကြည်လင်ဖို့ ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ လှပျိုဖြူတို့အတွက် မိန်းမမြတ်အင်္ဂ ါရပ်ထဲ တပါးပါဝင်သော အသားအရည်၏ကောင်းခြင်း ပြီးပြည့်စုံစေဖို့ အချက် လေးများကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ် (၁) သဘာဝ အုန်းဆီစစ် စစ် အုန်း ဆီ မှာ antioxidant တွေ အရောင်သက်သာစေသော ဓါတ်တွေ…
ကိုယ်ခံအားမြှင့်တင်ပေးနိုင်သော နည်းလမ်းများ ဒီနှစ်တုပ်ကွေးဟာ အတော်ခံစားရပါတယ် အဖျားလည်းတအားကြီးသလို ဖျားပြီး ရက်ရှည်ချောင်းဆိုးတာ နှာစေးတာကျန်ခဲ့ပါတယ် အထူးသဖြင့် ကိုယ်ခံအားကျချိန်မှာ အဖျားကူး ဖျားလို့ ခံတွင်းပျက် ဘာမှ မစား ခြင် ဘာမှ မစားတော့ ကိုယ်ခံအားထပ်ကျ မပြီးဆုံးသောသံသရာဖြစ်နေသူတွေကိုတွေ့မြင်နေရပါတယ် အဲလိုပါပဲ မနက်မိုးလင်းတိုင်း…
ယောဂကျင့်ထုံး (Yoga)ရဲ့ ကောင်းကျိုးအသွယ်သွယ် ယခုခေတ်မှာ ကျန်းမာရေးကို လူကြီးလူငယ်မရွေးလိုက်စားလာကြပြီဖြစ်တဲ့အတွက် အားကစားခန်းမ(Fitness Gymnasium)များ နေရာအတော်များများမှာပေါ်လာပြီဖြစ်ပါတယ်။ ထို့အတူပဲ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ကုထုံးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ ယောဂကျင့်စဉ် (Yoga)လေ့ကျင့်ရေးခန်းမများလည်းရှိလာပါပြီ။ ဒါ့ကြောင့် ယောဂကျင့်ခြင်းရဲ့ကောင်းကျိုးတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ၁. ခန္ဓာကိုယ်ကြွက်သားနှင့်အကြောများ ပျော့ပြောင်းလာခြင်း ယောဂကျင့်ခြင်းအားဖြင့် တစ်နေကုန်အညောင်းမိပြီးတောင့်တင်းနေတဲ့…
ဝက်ခြံညှစ်ခြင်း၏ ဆိုးကျိုးများ ဝက်ခြံထွက်တိုင်း မှန်ကြည့်လိုက်ရင် မျက်နှာပေါ်က ဝက်ခြံဖုရဲရဲလေးက ဖောက်ပစ်၊ ညှစ်ပစ်ချင် စရာပါ။ ဒါပေမဲ့ ကျွမ်းကျင်တဲ့ ပညာရှင်မဟုတ်ဘဲ မိမိဘာသာ ဝက်ခြံဖောက်ခြင်းဟာ ဆိုးကျိုးတွေကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဝက်ခြံပိုဆိုးလာခြင်း။ ဝက်ခြံဖု ပိုကြီးလာခြင်း။ ဝက်ခြံညှစ်ပြီးနေရာများတွင် အမာရွတ်၊ ချိုင့်ခွက်များကျန်ခဲ့ခြင်း။…
ဘယ်လိုလေးလှချင်တာလဲ? သင့်မျက်နှာပေါင်းမတင်မီ ပထမဆုံးစဉ်းစားသင့်တာကတော့ ” သင်ဘယ်လိုမျိုးလှချင်တာလဲ ” ဆိုတဲ့အချက်ပါ။ မျက်နှာဖြူဝင်းချင်တာလား? အရေးအကြောင်းတွေလျော့ပါးပြီးအသားအရည်တင်းရင်းချင်တာလား? အစက်အပြောက်တွေကင်းရှင်းချင်တာလား?….စသဖြင့်….ကိုယ်လိုချင်တဲ့ အာနိသင်ပေါ်မူတည်ပြီး ဘယ်လိုအသီးအနှံသုံးရမလဲဆိုတာ ကွဲပြားတာမို့ တစ်ခုချင်းစီ သေချာပြောပြပေးမယ်….အဆုံးထိဖတ်ပေးနော်…. ဘယ်လိုအသားအရည်မျိုးပဲဖြစ်ဖြစ် ပေါင်းတင်တော့မယ်ဆိုရင် အရင်ဆုံးလုပ်ရမှာက မိတ်ကပ်ဖျက်ပါ မိမိနှစ်သက်ရာ မျက်နှာသစ်ဆေးတစ်မျိုးမျိုးနဲ့ ရေခပ်နွေးနွေးကို…
Is it better to sleep with underwears on or not?
ညအခါ မိမိအတွင်းခံကို ချွတ်အိပ်သင့် မအိပ်သင့် ခုလို ပူပူလောင်လောင် နွေရာသီမျိုးမှာ ပေါ့ပါးလွတ်လပ်တဲ့ ဘယ်လိုအဝတ်အစားမျိုးတွေကို ရွေးချယ် ဝတ်ဆင်တတ်ကြဖို့ ယခင်က ရေးခဲ့ပြိးပြီမို့.. ခုတစ်ခါ ပူပြင်းတဲ့ နွေရာသီညတွေမှာ အိပ်စက်ချိန်တွင် မိမိအတွင်းခံဝတ်လျက် အိပ်သင့်မအိပ်သင့် ဆိုတဲ့ အကြောင်းလေး ပြောပြချင်ပါတယ်……
Blackheads beside your nose
နှာခေါင်းဘေးက အမဲစက်ကလေးတွေ လူတော်တော်များများရဲ့နှာခေါင်းဘေးလေးတွေမှာ အမဲစက်ကလေးတွေရှိကြမှာပါ။အချို့ကအစက်သေးသေးလေးတွေ သိပ်မသိသာဘူး၊အချို့ကျ ထင်းထင်းကြီးပေါ်နေပြီး မျက်နှာအလှပါပျက်တတ်တာမို့ ဒီအမဲစက်ကလေးတွေအကြောင်း အနည်းငယ်ပြောပြချင်ပါတယ်။ နှာခေါင်းဘေးက အမဲစက်ကလေးတွေဆိုတာ ဘာတွေလဲ… Blackheads(open comedones)ခေါ်တဲ့ ဆားဝက်ခြံ(အမဲစက်ကလေးတွေ)ဟာ ဝက်ခြံအမျိုးအစားတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။မျက်နှာကထွက်တဲ့အဆီ၊အရေပြားဆဲလ်သေများ၊ဖုန်အညစ်အကြေးများနဲ့ ဘက်တီးရီးယားပိုးလေးတွေဟာ မျက်နှာအသားအရေပေါ်မှာရှိတဲ့မွေးညင်းပေါက်ကလေးတွေမှာပိတ်ပြီး လေနဲ့ထိတွေ့ကာ အမဲရောင်အစက်(ဝက်ခြံ)လေးတွေ အဖြစ် ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။…